Osomabhizinisi be-Covid – Benza ubugebengu ngesikhathi abantu beshona | Scrolla Izindaba
Osomabhizinisi be-Covid – Benza ubugebengu ngesikhathi abantu beshona
Kanti akwanele ukuba nobhubhane olubulalayo, nomnotho owonakele…
Esinye sezici ezimbi kakhulu zango-2020 kube yihlazo lezinto zokuzivikela zomuntu siqu (ama-PPE).
Ngesikhathi leli gciwane lihlasela, abangani noma abalingani bebhizinisi bezikhulu zikahulumeni bangena ukuze benze izigidi kusukela ekufunweni kwama-PPE.
Izigidigidi ezingama-R500 zabekwa eceleni kubekelwa ama-PPE ngenxa ye-Covid, kodwa okuningi kwalokho kubonakala sekuthole indlela yokungena emaphaketheni alabo abathanda amathenda – nosomabhizinisi be-Covid.
Ekucwaningweni kwamabhuku okukhethekile, umcwaningimabhuku jikelele ongasekho uKimi Makwetu uthole ukuthi, imithetho yokuthengwa kwempahla iphuliwe, imishini esezingeni eliphansi kanye nenkohliso. Kwezinye izimo iminyango kazwelonke neyesifundazwe yezempilo kanye nemfundo ikhokhe imali ephindwe kahlanu kunaleyo ebekufanele ikhokhwe.
Amahlazo akhuphuke kakhulu ngoNcwaba, ngesikhathi onke amehlo ebheke kusomabhizinisi, iNkosi yamaBhaca uMadzikane II Thandisizwe Diko. Yena nonkosikazi wakhe owayengumkhulumeli kamengameli uKhusela Diko, bathinteka esigamekweni sokukhishwa kwethenda lezigidi ezingama-R125.
Amahlazo mayelana nama-PPE abengagcini eNingizimu Afrika kuphela. Kuke kwaba yizindaba ezinkulu eBrithani, lapho uhulumeni asolwa khona ngokusheshisa izinkontileka zabangani abangenalwazi kanye nabalingani bezepolitiki.
Elinye lamahlazo aseBrithani kwaze kwaba nenguquko eNingizimu Afrika, ngesikhathi inkampani encane eyaziwa ngokuthi iAyanda Capital ithola izinkontileka ezibalelwa kwizigidigidi ezi-R5,8 zezifonyo ezagcina zingasasebenziseki.